कोरोना उपचारमा खटिएका डाक्टरको हात देखेर कसको मन भावुक हुँदैन र ! – Butwal Sandesh
कोरोना उपचारमा खटिएका डाक्टरको हात देखेर कसको मन भावुक हुँदैन र !
कोरोना म*हामारीले आ*क्रान्त बनेको बिश्वलाई सम्हाल्न डाक्टरले अग्रपंत्तिमा रहेर काम गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा डाक्टर नर्स लगायतका स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्त्तिहरुले आफ्नो योग्दान दिइरहेको छन् । केहि समयअघि चिनका डाक्टर र नर्सहरुले मास्क उतारेपछिको अनुहार भा*इरल भएको थियो ।
धेरैले उनहरुप्रति सहानुभूति प्रकट गरेका थिए । सार्वजनिक भएका तस्विरमा उनीहरुको अनुहारभरी मास्कको नि*लडाम देखिन्थ्यो । इटालीमा मात्रै धेरै डाक्टरले बि*रामीको स्याहार गर्दा गर्दै कोरोना सं*क्रमणको शि*कार भएर ज्या*न गु*माए ।
लामो समयसम्म पीपीई लगाएर काम गर्दा उनीहरुको अवस्था कस्तो हुन्छ ? के तपाईले कल्पना गर्नुभएको छ ?
पिपिईले कोरोनाको सं*क्रमणबाट त बचाउँला तर त्यसको हा*नी पनि कम छैन । सोमबार ट्वीटरमा अवनिष कुमारले एउटा फोटो शेयर गरेका छन् । उक्त्त फोटोमा देखिएको हात भारतको डाक्टरको हो ।
उनको हातलाई देखाउँदै अवनिषले लेखेका छन् । “यो हात कोरोनाको उपचारमा संलग्न भएको डाक्टरको हो । जस्ले १० घण्टाको ड्युटी सकेर पन्जा फुकाल्दाको हो । उनीहरु नै रियल हिरो हुन् र हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।” उनको यो पोष्ट अहिले भा*इरल भइरहेको छ । धेरैले डाक्टरलाई भगवान मानेर पुजा गर्ने बताइरहेका छन् ।